Danjirihii Soomaaliya u fadhiyay Masar oo geeriyooday - Wargeyska Faafiye
Danjirihii Soomaaliya u fadhiyay Masar oo geeriyooday
Danjirihii Soomaaliya u fadhiyay dalka Masar Cabdullaahi Xasan Maxamuud ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Cairo ee caasimadda dalka Masar.Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa asagoo ka hadlayay geerida danjiraha wuxuu sheegay inay Soomaaliya waysay mid ka mid ah tiirarkii aasaaska u ahaa dibloomasiyadda.
“Innaa lillaahi waa Innaa Ileyhi Raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto marxuumka. Waxaa uu ka mid ahaa tiirarkii aasaaska u ahaa diblomaasiyadda Soomaaliya. Waxaa khibraddiisa u dheereyd dadaal gaar ah oo uu ugu adeegayey qaranka muddadii burburka aan ku jirney,” ayuu yiri madaxweynaha.
Wuxuu marxuumka Ilaah uga baryay inuu naraxiistiisii Fardowsa ka waraabiyo, qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyoodayna uu samir iyo iimaan ka siiyo.
Danjire Xasan wuxuu muddo dheer ka mid ahaa diblomaasiyiinta udub dhexaadka u ahaa xiriirka Soomaaliya iyo waddamada Carabta.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsKobe Bryant still sees hope in Lakers' season while looking for someone to help him leadR/w.Cusub oo mar dhaw la filayo in lagu dhawaaqo.Dagaal dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay CeelbuurX/wasaaradaha oo laga bixiyay barakayaashaAbu Mansoor al-amriki oo la dilay